प्रश्नः म २४ वर्षको भएँ । मेरा दुइवटा समस्या छन् । पहिलो समस्या मेरो लिंग मेरा साथीहरूको भन्दा सानो छ । यसको लम्बाइ ५ इन्च तथा चौडाइ ४ इन्च छ । त्यस कारण मैले आफ्नो लिंगको साइज बढाउनुपर्ने भएको छ । दोस्रो समस्या, म मानसिक रुपमा तयार भए पनि शारीरिक रूपमा यौनसम्पर्कका लागि तयार हुनसक्दिन । यौनसम्पर्कभन्दा पहिले नै मेरो लिंग शिथिल हुन्छ, तर यो समस्या हरेक पटक भने हुँदैन । कुनै-कुनै बेला मात्र यस्तो समस्या हुन्छ । हस्तमैथुनका बेला यो राम्रैसँग उत्तेजित हुन्छ र सामान्य रूपमै कार्य गर्छ । कुनै बेला यौनसम्पर्कका बेलामा वीर्य स्खलन हुनुभन्दा पहिले नै शिथिल हुन्छ । मैले पत्रपत्रिकामा आएका विज्ञापनअनुसार सल्लाह पनि लिए । उनीहरूले मलाई चक्की तथा स्प्रे दिए, जुन एकदमै महँगा थिए तर त्यसको कुनै फाइदा भएन । -र.
उत्तरः के लिंग साथीको जत्रै हुनपर्छ ?
लिङ्ग एक विशेष अंग हो र यसको सांकेतिक महत्त्व बढी छ । यसलाई पुरुषको 'व्यक्तित्व' वा भनौं उसको 'पौरुषत्व' सँगै जोडिएको मानिन्छ, त्यसैले आफ्नो लिंगप्रति निकै चासो र चिन्ता हुन्छ । कतिपय व्यक्तिले लिंगको लम्बाइ वा मोटाइ सामान्य भए पनि सानो भयो कि भनेर पीर -चिन्ता) गर्छन् र यस्तो स्थितिलाई अंग्रेजीमा Small Penis Syndrome भनिन्छ । सालाखालाको कुरा गर्दा यस्तो ८८ प्रतिशत पुरुषको लिंग उत्तेजित हुँदा ५-७ इन्च लम्बाइको हुने देखिएको छ भने उत्तेजित नहुँदा ३-५ इन्चको हुने देखिएको छ थोरै व्यक्तिको लिंग त्यसभन्दा पनि सानो हुन्छ । तपाईंले आफ्नो नाप ठीकसँगै लिनुभयो होला भन्ने विश्वास गर्छु ।
सामान्यभन्दा सानो भए पनि तपाईंले यौनसम्पर्क तथा हस्तमैथुन सजिलैसँग गर्नुभएको देखिएको छ । महिलाको यौनसुखको केन्द्र भगांकुर हो र यो बाहिरतिरै हुन्छ । फेरि योनिको बाहिरतिरको एकतिहाइ भाग नै विशेष रूपमा यौन संवे दनशील हुन्छ र साधारणतया छोटो भनिने लिंग पनि आफ्नो यौनसाथीलाई यौनसुख दिन पुग्ने नै हुन्छन् । हामी सबैको शरीर, अंग प्रत्यंग एकनासका हुँदैनन् । उदाहरणका लागि उचाइ केही अग्लो वा होचो हुँदैमा जीवनमा आइपर्ने कार्य गर्नै नसक्ने होइन । यो कुरा लिंगमा पनि लागू हुन्छ । तपाईंको
कतिपय अंग साथीका भन्दा निकै फरक होलान् तर लिंग भने उत्रै किन चाहियो ? त्यसैले यसलाई साथीसँग दाँज्नु तर्कसंगत छैन ।
लिंग बढाउने उपाय तथा त्यसका विज्ञापन ?
संसारभरि प्रयोग गरिने लिंग बढाउने उपायहरूलाई मोटामोटी रूपमा चार प्रकारमा विभाजित गर्न सकिन्छः १. कसरत तथा हातैले तन्काउने विधि २. तौल वा यन्त्रको सहायताले तन्काउने विधि ३. पम्प प्रयोग गर्ने विधि ४. शल्यक्रिया । यौनसुखका लागि लिंगको नाप बढाउनतिर लाग्नुभन्दा पहिले पर्याप्त विचार पुर्‍याउनुपर्छ । लिंग बढाउने कुरा गर्दा विज्ञापन वा साथीको दबाबमा लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । यस्ता विज्ञापनले लिंगको नाप सामान्यभन्दा कम भयो भने त यौ नजीवन नै समाप्त भयो कि जस्तो भान पार्ने सूचना दिन्छन् । लामो लिंग हुँदैमा सबै यौनसुख स्वतः र सहज रूपमा पाइन्छ जस्तो कुरा गर्छन् । फेरि सजिलै यी अंगका नापमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा पनि त्यसमा हुन्छ । वास्तवमा यथार्थ केही फरक छ ।
लिंग उत्तेजना नहुने कारण ?
चाहिएको बेलामा चाहेजस्तो लिंग उत्तेजित नभै यौनसम्पर्क राख्न नसकेको अनुभव धेरैजसो पुरुषले जीवनको कुनै न कुनै बेला गरेका हुन्छन् । लिंग उत्तेजित नहुनु वा उत्तेजित अवस्थामा आइसकेको लिङ्गलाई सो स्थितिमा राख्न नसक्ने समस्यालाई अंग्रेजीमा impotence वा भचभअतष्भि मथकागलअतष्यल भनिन्छ । राम्रोसँग लिंग उत्तेजित नहुने कारण शारीरिक तथा मानसिक दुवै हुन सक्छन् । लिङ्गको उत्थित हुन सक्ने तन्तुमा रक्तप्रवाहलाई नकारात्मक रुपमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि स्थिति लिंग उत्तेजना नहुने सम्भावित कारण बन्न सक्छ । मानिस यन्त्र नभएकाले उसका कार्य एकनासका हुँदैनन् । लिंगको दह्रोपनका लागि मानसिक पक्ष एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । जीवनमा सबैजसो पुरुषले कुनै न कुनै बे ला लिंग उत्तेजना हुन अप्ठयारो भएको वा कडापन कम भएको महसुस गरेका हुन्छन् । हुनत लिंग उत्तेजित हुन नसक्ने थुप्रै कारण हुन सक्छन् । हस्तमैथुन गर्दा लिंग राम्रैसँग उत्तेजित भएको कुराले तपाईंको शारीरिक पक्ष सामान्य नै भएको देखिन्छ । तनावपूर्ण वा डर भएको स्थितीमा भने लिंग उत्तेजित नै नहुन वा भएको उत्तेजना पनि हराउन सक्छ । नलेख्नु भए पनि, कडा सामाजिक बन्देज भएको हुनाले अविवाहित यौनसम्बन्ध राख्दा वा प्रयास गर्दा एक किसिमको तनाव त हुन्छ नै । समाजवाट लुक्नुपर्ने मात्र होइन, मनमा पनि द्वन्द्वात्मक स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसमा पनि हतारमा यौनसम्पर्क गर्नुपर्दा वा कसैलाई आफ्नो यौनक्षमता प्रदर्शित गर्नुपर्ने दबाब भए समस्या अझ चर्को हुनसक्छ ।
यसलाई कम गर्न के गर्नुपर्ला ?
किशोरावस्था तथा युवा अवस्थामा लिंगको उत्तेजना सजिलै हुन्छ, तर लिङ्गको उत्तेजना चाहेअनुरूप कायम राख्न नसक्दा त्यसका बारेमा निकै चासो तथा चिन्ता हुन्छ । आफ्नो यौन क्षमता प्रदशित गर्नुपर्ने दबाब भएन समस्या अझ बढ्छ । यस्तो स्थितिलाई peformance anxiety भनिन्छ । तपाईंको छोटो पत्रका आधारमा सबै कुरा खुलस्त हुनसकेको छैन । सर्वप्रथम त कारण नै पत्ता लगाउने पर्ने हुन्छ, किनभने त्यसको उपचार वा समाधान त्यसैमा भर पर्छ । कारण थाहा नभै उपचार मिल्यो-मिलेन भन्ने कुरा पनि आएन । तपाईंले सेवन गर्नुभएको औषधी वा स्प्रेको भएका औषधी (सक्रिय रसायन) के हो भन्ने थाहा नभै त्यसका बारेमा केही भन्न सकिने स्थिति रहेन ।
मुख्य कुरा तनाव, चिन्ता वा भयलाई कम गर्न सक्नुपर्छ । तपाईंले आत्मविश्वास बढाउनतिर लाग्नुपर्छ । विशेष गरेर आफ्नो यौन साथीको सहयोग लिनु आवश्यक हुन्छ । यौनसाथीसँग लिङ्ग उत्तेजित हुने गरेर यौनसम्पर्करहित क्रियाकलापमा पर्याप्त समय बिताए सहयोग पुग्न सक्छ । दुवैले आफ्नै समस्या हो भन्ने मानेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ प्रयास गरे समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । समस्या कायमरहे चिकित्सकसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ ताकि समस्याको सही कारण पत्तालाई त्यसैअनुसार उपचार गर्न सकियोस् ।